6 Ọ dị ọdachi m hụworo n’okpuru anyanwụ, ọ na-emekarịkwa n’etiti ụmụ mmadụ:
2 mmadụ nke ezi Chineke nyere akụ̀ na ihe onwunwe na ebube,+ onye ọ na-adịghịkwa ihe ọ bụla gụrụ ya agụụ nke kọrọ mkpụrụ obi ya,+ ma ezi Chineke emeghị ka o nwee ike iri ya,+ n’agbanyeghị na onye mba ọzọ+ pụrụ iri ya. Nke a bụ ihe efu, ọ bụkwa ọrịa ọjọọ.
3 Ọ bụrụ na mmadụ amụọ otu narị ụmụ,+ ya adịkwa ndụ ruo ọtụtụ afọ, afọ ndụ ya ewee dị ọtụtụ,+ ma mkpụrụ obi ya enwetaghị afọ ojuju n’ihe ọma,+ ọbụna ili erughị ya aka,+ m ga-asị na nwa nwụrụ n’afọ ka ya mma.+
4 N’ihi na ọ bụ n’efu ka a mụrụ nwa ahụ, ọ bụkwa n’ọchịchịrị ka ọ na-ala, ọchịchịrị ga-ekpuchi aha ya.+
5 Ọ hụghịdị anyanwụ, ọ maghịkwa ya.+ O nwere ezumike karịa onye nke ọzọ.+
6 A sịgodị na ọ dịwo ndụ otu puku afọ okpukpu abụọ ma ọ hụghị ihe ọma,+ ọ́ bụghị n’otu ebe ahụ ka mmadụ niile na-aga?+
7 Ọrụ niile ụmụ mmadụ na-arụsi ike bụ maka ọnụ ha,+ ma afọ adịghị eju ọbụna mkpụrụ obi ha.
8 N’ihi na olee ihe onye maara ihe ji kara onye nzuzu mma?+ Gịnị ka onye nọ n’ahụhụ na-erite n’ịmara otú e si eje ije n’ihu ndị dị ndụ?
9 Iji anya hụ ihe dị mma karịa ịwagharị n’agụụ na-agụ mkpụrụ obi.+ Nke a kwa bụ ihe efu, bụrụkwa ịchụso ifufe.+
10 Ihe ọ bụla nke dị adị, a kpọworị ya aha, a marawokwa ihe mmadụ bụ;+ o nweghịkwa ike ịrụ onye ka ya ike ụka.+
11 Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ihe na-akpata ihe efu dị ukwuu,+ gịnị bụ uru mmadụ na-erite?
12 N’ihi na ònye maara ihe ọma mmadụ ga-enweta ná ndụ+ n’ime ụbọchị niile nke ndụ ya nke bụ́ ihe efu, ebe ha na-agafe dị ka onyinyo?+ N’ihi na ònye pụrụ ịkọrọ mmadụ ihe ga-eme n’okpuru anyanwụ mgbe ọ na-anọkwaghị?+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D21%26Chapter%3D6%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl